update mg.po · f439c83b4b - tasksel - Devuan Git Store
Jaonary Rabarisoa 15 years ago
1 changed files with 129 additions and 377 deletions
tasks/po/mg.po View File
"POT-Creation-Date: 2006-11-14 20:25+0100\_n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-24 20:52+0100\_n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-19 18:29+0100\_n"
"Last-Translator: Jaonary Rabarisoa <jaonary@free.fr>\_n"
"Language-Team: Malagasy <mpandikateny@linuxmg.org>\_n"
@@ -23,12 +23,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Arabo"
"Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra ary fanampiana izay mety "
"hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Arabo."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra ary fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Arabo."
@@ -57,12 +53,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny bielorosianina"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny "
"bielorosianina hanampiana ireo mpampiasa an'i Debian miteny bielorosianina."
msgid "This task installs packages and documentation in Belarusian to help Belarusian speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny bielorosianina hanampiana ireo mpampiasa an'i Debian miteny bielorosianina."
@@ -81,13 +73,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Bengali"
"Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratra ary "
"fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratra ary fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Spanish."
@@ -101,19 +88,13 @@ msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny Bengaly."
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Romanina"
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Bosnian"
"Romanina, hanampiana ireo miteny Romanina amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Bosnian, hanampiana ireo miteny Bosnian amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -132,13 +113,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny portugais brezialianina"
"hahamoramora ny fampiasana an'i Debian, ho an'ireo Brezilianina miteny "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra ary fanampiana izay mety hahamoramora ny fampiasana an'i Debian, ho an'ireo Brezilianina miteny portugais."
@@ -148,36 +124,27 @@ msgstr "Birao amin'ny teny portugais brezilianina"
"Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny portugais Brazilianina."
msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny portugais Brazilianina."
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Bengali"
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Anglisy"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Danois, "
"hanampiana ireo izany meteny Danois amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in British English to help British English speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Anglisy, hanampiana ireo izany miteny Anglisy amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Birao amin'ny teny bengali"
msgstr "Birao amin'ny teny Anglisy"
msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny Bengaly."
msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny Anglisy."
@@ -186,12 +153,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Bolgara"
"Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa sy rakitra izay hahamora ny "
"fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Bolgara."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa sy rakitra izay hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Bolgara."
@@ -210,13 +173,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Katalanina"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny "
"Katalanina, hanampiana ireo izany miteny Katalanina amin'ny fampiasana an'i "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Katalanina, hanampiana ireo izany miteny Katalanina amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -235,14 +193,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Sinoa notsorina"
"Ity asa ity dia mametraka ireo rindrankajy, rakitra \_"data\_", tarehin-"
"tsoratra ary ny fanampiana mety hahamora ny fampiasana an'i Debian, ho "
"an'ireo izay miteny Sinoa sy mampiasa ny encodage Sinoa notsorina."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindrankajy, rakitra \_"data\_", tarehin-tsoratra ary ny fanampiana mety hahamora ny fampiasana an'i Debian, ho an'ireo izay miteny Sinoa sy mampiasa ny encodage Sinoa notsorina."
@@ -261,14 +213,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Sinoa tradisionaly"
"fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian, ho an'ireo izay "
"miteny Sinoa sy mampiasa \_"encodage\_" Sinoa tradisionaly."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratra ary fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian, ho an'ireo izay miteny Sinoa sy mampiasa \_"encodage\_" Sinoa tradisionaly."
@@ -282,20 +228,13 @@ msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny sinoa tradisionaly"
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Katalanina"
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Kroaty"
msgid "This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Kroaty, hanampiana ireo izany miteny Kroaty amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -314,11 +253,9 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Sirilika"
msgstr "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
@@ -327,10 +264,9 @@ msgstr "Birao Sililika"
msgstr "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
@@ -339,12 +275,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Tseky"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Tseky, "
"hanampiana ireo izay miteny Tseky amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Tseky, hanampiana ireo izay miteny Tseky amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -363,12 +295,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Danois"
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Danois, hanampiana ireo izany meteny Danois amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -388,24 +316,14 @@ msgstr "SQL database"
msgstr "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user database access, through its facilities for transactions and fine-grained locking."
@@ -414,9 +332,7 @@ msgstr "Tontolo fiasana kisary"
@@ -426,8 +342,7 @@ msgstr "Mpizara DNS"
@@ -437,13 +352,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Alemanina"
"Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratr ary "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratr ary fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Alemanina."
@@ -492,9 +402,7 @@ msgstr "Mpizara rakitra"
@@ -504,13 +412,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Filandais"
msgid "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Finnish, hanampiana ireo izany miteny Finnish amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -529,12 +432,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Frantsay"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny frantsay "
"mba hanampiana ireo izay miteny frantsay amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny frantsay mba hanampiana ireo izay miteny frantsay amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -553,12 +452,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Galician"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Galician "
"mba hanampiana ireo miteny Galician amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Galician mba hanampiana ireo miteny Galician amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -587,12 +482,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny alema"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny alema "
"mba hanampiana ireo izay miteny allemand amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny alema mba hanampiana ireo izay miteny allemand amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -611,10 +502,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana kisary Gnome"
msgstr "Mametraka ireo rindran'asa kisary fototra izay miaraka amin'ny tontolo Gnome. "
@@ -623,12 +512,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Grika"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Grika "
"mba hanampiana ireo izay miteny Grika amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Grika mba hanampiana ireo izay miteny Grika amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -657,12 +542,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Hebreo"
"Ity asa ity dia mametraka ny rindran'asa sy ny fanampiana amin'ny teny "
"hebreo mba hanampiana ireo izay miteny hebreo amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny rindran'asa sy ny fanampiana amin'ny teny hebreo mba hanampiana ireo izay miteny hebreo amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -681,13 +562,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Hindi"
"hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Spanish."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratra ary fanampiana izay hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Hindi."
@@ -706,12 +582,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Hungarian"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny hongrois "
"mba hanampiana ireo izay miteny hongrois amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny hongrois mba hanampiana ireo izay miteny hongrois amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -730,13 +602,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Icelandic"
"Icelandic hanampiana ireo izay miteny Icelandic amin'ny fampiasana an'i "
msgid "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Icelandic hanampiana ireo izay miteny Icelandic amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -755,12 +622,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Irish"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Irish, "
"hanampiana ireo izay miteny Irish amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Irish, hanampiana ireo izay miteny Irish amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -779,13 +642,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Italianina"
"italianina mba hanampiana ireo izay miteny italianina amin'ny fampiasana "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny italianina mba hanampiana ireo izay miteny italianina amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -804,12 +662,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Japonais"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana izay mety hahamoramora ny fampisana "
"an'i Debian ho an'ireo izay miteny Japonais."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana izay mety hahamoramora ny fampisana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Japonais."
@@ -828,10 +682,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana kisary KDE"
msgid "This task provides basic \_"desktop\_" software using the K Desktop Environment."
msgstr "Mametraka ireo rindran'asa kisary fototra izay miaraka amin'ny tontolo K Desktop. "
@@ -840,12 +692,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Khmer"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Khmer, "
"hanampiana ireo izay miteny Khmer amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Khmer, hanampiana ireo izay miteny Khmer amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -864,12 +712,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Koreanina"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana izay hahamora ny fampiasana an'i "
"Debian ho an'ireo izay miteny Koreanina."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana izay hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Koreanina."
@@ -889,7 +733,7 @@ msgstr "Solosaina finday"
msgstr "Mametraka ireo rindran'asa izay mety ilain'ny solosaina finday."
@@ -908,12 +752,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana \_"Lituanien\_""
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny \_"Lituanien\_", "
"hanampiana ireo izay miteny \_"Lithuanien\_" amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny \_"Lituanien\_", hanampiana ireo izay miteny \_"Lithuanien\_" amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -932,13 +772,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Masedoniana"
"Macedonian, hanampiana ireo izay miteny Macedonian amin'ny fampiasana an'i "
msgid "This task installs packages and documentation in Macedonian to help Macedonian speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Macedonian, hanampiana ireo izay miteny Macedonian amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -957,9 +792,7 @@ msgstr "Mpizara mailaka"
@@ -970,7 +803,7 @@ msgstr "safidy an-tanana ny fonosana"
msgstr "Safidy an-tanana ireo fonosana hapetraka miaraka amin'ny aptitude."
@@ -999,13 +832,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana Norwegian (Bokmaal sy Nynorsk)"
"Norwegian, hanampiana ireo izay miteny Norwegian amin'ny fampiasana an'i "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Norwegian, hanampiana ireo izay miteny Norwegian amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1024,13 +852,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Persa"
"fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo miteny "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratra ary fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo miteny Persa."
@@ -1049,12 +872,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Polonais"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Polonais, "
"hanampiana ireo izay miteny Polonais amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Polonais, hanampiana ireo izay miteny Polonais amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1073,13 +892,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Portuguese"
"Portuguese, hanampiana ireo izay miteny Portuguese amin'ny fampiasana an'i "
msgid "This task installs packages and documentation in Portuguese to help Portuguese speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Portuguese, hanampiana ireo izay miteny Portuguese amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1109,13 +923,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Punjabi"
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratra ary fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo miteny Punjabi."
@@ -1134,12 +943,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Romanina"
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Romanina, hanampiana ireo miteny Romanina amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1158,13 +963,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Rosianina"
"Ity asa ity dia mametraka ireo rindrankajy sy fanampiana amin'ny teny "
"Rosianina hanampiana ireo izay miteny Rosianina amin'ny fampiasana an'i "
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindrankajy sy fanampiana amin'ny teny Rosianina hanampiana ireo izay miteny Rosianina amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1178,31 +978,23 @@ msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny Rosianina."
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Persa"
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Serba"
msgid "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Serba, hanampiana ireo izay miteny Serba amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Birao amin'ny teny Persa"
msgstr "Birao amin'ny teny Serba"
msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny tenyPersa."
msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny Serba."
@@ -1211,12 +1003,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana Slovaky"
"Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Slovaky, "
"hanampiana ireo miteny Slovaky amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Slovaky, hanampiana ireo miteny Slovaky amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1235,13 +1023,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Slovenian"
"Slovenianina, hanampiana ireo miteny Slovenianina amin'ny fampiasana an'i "
msgid "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ny fonosana sy ny fanampiana amin'ny teny Slovenianina, hanampiana ireo miteny Slovenianina amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1260,12 +1043,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana Spanish"
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra ary fanampiana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Spanish."
@@ -1294,9 +1073,7 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Swedish"
@@ -1316,28 +1093,18 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Tagalog"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Tagalogy, "
"hanampiana ireo miteny Tagalogy amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Tagalogy, hanampiana ireo miteny Tagalogy amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgstr "Tontolo fiasan Thai"
msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Tamil"
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo rindran'asa, rakitra, tarehin-tsoratra ary fanampiana izay hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ireo izay miteny Tamil."
@@ -1356,12 +1123,8 @@ msgstr "Tontolo fiasan Thai"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana izay mety hahamora ny fampiasana "
"an'i Debian ho an'ny Thai."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana izay mety hahamora ny fampiasana an'i Debian ho an'ny Thai."
@@ -1380,9 +1143,7 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Turkish"
@@ -1402,9 +1163,7 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Ukrainian"
@@ -1434,8 +1193,7 @@ msgstr "Mpizara web"
@@ -1445,12 +1203,8 @@ msgstr "Tontolo fiasana amin'ny teny Welsh"
"Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Welsh, "
"hanampiana ireo miteny Welsh amin'ny fampiasana an'i Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh speaking people use Debian."
msgstr "Ity asa ity dia mametraka ireo fonosana sy fanampiana amin'ny teny Welsh, hanampiana ireo miteny Welsh amin'ny fampiasana an'i Debian."
@@ -1464,16 +1218,13 @@ msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny Welsh."
msgstr "Tontolo fiasana kisary Gnome"
msgstr "Tontolo fiasana kisary Xfce"
msgid "This task provides basic \_"desktop\_" software using the Xfce desktop environment."
msgstr "Mametraka ireo rindran'asa kisary fototra izay miaraka amin'ny tontolo Xfce. "
@@ -1514,3 +1265,4 @@ msgstr "Ity asa ity dia mamaritra ny birao amin'ny teny Xhosa"
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "This task sets up your system to be a print server."